Jeux corporatifs : mitohy ny fisoratana anarana | NewsMada
Jeux corporatifs : mitohy ny fisoratana anarana
Par Taratra sur 19/07/2016
Mbola misokatra ho an’ireo orinasa maniry handray anjara amin’ilay «jeux corporatifs», karakain’ny Association Centre des Ecoles Pépinières d’Alliance, ny fisoratana anarana. Lalao hatao, etsy amin’ny kianja Esca Antanimena, ny asabotsy 30 sy ny alahady 31 jolay ho avy izao.
Raha tsiahivina, taranja dimy no hifaninanana dia ny baolina kitra ho an’olona fito, ny volley-ball, ny basikety, ny tsipy kanetibe ary ny «belote». Ny taranja baolina kitra no be mpandray anjara indrindra. Na izany aza, misy ihany koa ary tsy vitsy ireo misoratra anarana amin’ireo taranja hafa.
300.000 Ar ny saran’ny fandraisana anjara, izay hifarana ny asabotsy 23 jolay izany, fotoana ihany koa hanatanterahana ny fivoriana ara-teknika, ao amin’ny efitranon’ny Esca Antanimena, ihany. Amin’ny maha lalao ho an’ny mpiasa amin’ny orinasa azy ity, tsy afaka mandray anjara, ireo manana kara-pilalaovana eny anivon’ny seksiona sy ny ligy.
Hotolorana amboara sy ondry ny orinasa mandresy, amin’ity lalao ity.